Mailchimp waxay cusbooneysiineysaa muuqaalkeeda astaanta iyo khibrada isticmaale | Abuurista khadka tooska ah
Mailchimp waa adeeg caan ku ah suuqgeynta iimaylka iyo in maalmihii la soo dhaafay ay ku dhaqaaqday isbeddel buuxa oo ah naqshadeynta sumadda. Taasi waa, hadda waxaan haystaa aqoonsi cusub oo si dhow ugu xiran jaalaha midab aad u hooseeya.
Sidan oo kale, haddii aad isticmaasho adeegga suuqgeynta iimaylka, markaad gasho dashboardka koontadaada, waxaad arki doontaa jaalle meel kasta. Waxay ahayd hay'adaha Collins iyo R / GA oo kawada shaqeeyay sidii loo dhammaystiri lahaa isbeddelka Mailchimp.
cunt Collins waxaan ka horreynaa shirkad horey khibrad uleh shaqooyinkan. Caadi ahaan waxay ka caawisay Mailchimp inuu caddeeyo aqoonsigiisa iyo nidaamkiisa sumcadda, iyadoo kor u qaadaysa dabeecadda aan caadiga ahayn ee ka jirta.
Isku soo wada duuboo, Collins ayaa leh mascot brand casriyeeyay magacaabay Freddie, ayaa ka soo dhaqaaqay astaan ​​hore una sii gudbiyay mid casri ah oo si qumman ula socota boodada, wuxuu ku daray dhowr qaab oo sawir qaadis wuxuuna ku soo daray qaab sawir cusub oo si fiican ugu habboon muujinta shaqsiyeed ee sumadda.
Dhanka kale waxaan leenahay R / GA, oo ah ayaa mas'uul ka ahaa khibradda adeegsadaha adoo ku abuuraya naqshad cusub bog cusub oo la jaan qaada yoolalka Mailchimp.
Waxay diiradda saareen dib u qaabeynta astaamaha la xiriirta qofka dareenkiisa iyo qalbigiisa taxane ah hal-abuur la xiriira teknolojiyad cusub. Fikradda ayaa ah in la xoojiyo astaamaha labadaba qalab ahaan iyo adeeg ahaan aad rabto inaad ku xoojiso xiriirka ka dhexeeya macaamiisha iyo Mailchimp.
Dhawaan ayey ahayd markii aan aragnay naqshadeynta cusub ee Uber, in kasta oo si xarrago leh loogu shaqeeyay sii qodobkaa gaarka ah ee far-qorista. Iyadoo Mailchimp isku si ayaan u nahay marka dib loo qeexaayo wax kasta oo la xiriira astaanta adeegga suuqgeynta iimaylka heer sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Mailchimp wuxuu huruud u noqdaa qaabeynta dib u qaabeynta
Rinjigaaga ku rinji wakhtiga diiwaangelinta